Shabaab oo Shabellaha Hoose ku gubay gaadiid u rarnaa ganacsato (SAWIRRO) – AfmoNews
Shabaab oo Shabellaha Hoose ku gubay gaadiid u rarnaa ganacsato (SAWIRRO)
Gaadiidkan oo u rarnaa ganacsato Soomaaliyeed ayay maleeshiyada Al Shabaab ku gubeen deegaanka Yaaq-bariweyne ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Gaadiidkan oo saddex gaarayay ayaa waday shixnado ganacsi iyo weliba dhuxul, iyadoona loo waday ganacsato ku kala sugan Gobolada Baay, Bakool iyo Gedo.
Wararka ayaa sheegaya in darawaladii gaadiidka oo ka ambabaxay Magaalada Muqdisho ay ka baxsadeen maleeshiyadii soo weerartay.
Deegaanka lagu gubay gaadiidkan oo ka tirsan Degmada Wanlaweyn ayaa dhawr jeer deegaanada ku dhow dhow loogu gubay gaadiid dhuxul u waday gobolada dalka qaarkood.
Dhanka kale wararka ka imaanaya Degmada Afgooye ayaa sheegaya in ay ku xaniban yihiin gaadiid fara-badan oo ganacsi u siday Gobolada Koonfureed, sababo ku aadan ganacsatada oo ka baqdin qaba in ay Shabaabka gubaan.
Ma cadda sababta ay Shabaabka xilligan u bartilmaameedsanayaan gaadiidka ganacsiga u wada Gobolada Koonfurta, ha yeeshee dadka qaarkii waxay ku macneeyeen mid ay ku xoojinayaan go’doominta ay ku hayaan.